Ishedi yokugcina yasemaphandleni kunye nesembindini-ikhabhathi epholileyo - I-Airbnb
Ishedi yokugcina yasemaphandleni kunye nesembindini-ikhabhathi epholileyo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguNina Lunderød
Ikhabhathi epholileyo netofotofo, ebekwe emaphandleni engqonge kodwa nje iikhilomitha ezi-6 kumbindi we-Arendal apho uya kufumana iivenkile, iivenkile zokutyela, iikhefi, iibhari kunye nezikhephe eziya kwiziqithi ezikufuphi. I-1 km ukuya kwivenkile ekufutshane kunye nekhefi yendawo kunye nemizuzu engama-35 ukuya eKristiansand Zoo okanye imizuzu engama-45 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseKjevik. Imizuzu engama-20 ukuya eGrimstad. Ikhabhinethi iza neendawo zokupaka kunye nepatio yabucala kunye nelinen yebhedi kunye neetawuli.
Le khabhathi ilungiswe kakuhle inokufumaneka kwindawo esemaphandleni kwifama yosapho lwethu. Yonwabela eyakho ipatio yangasese yekofu yasekuseni elangeni, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela, ilinen yokulala, kunye neetawuli, kunye nendawo yokuhlala yangoku netofotofo egcwele ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iTV, iWiFi, nayo yonke into oyifunayo.
Ukuhamba nje okufutshane uya kufumana idolophu engaselwandle yase-Arendal, eneendawo ezininzi zeevenkile, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neebhari kunye nezindlu zamaplanga zenkulungwane ye-17 kwindawo entle yaseTyholmen. Iilwandle kukumgama omfutshane wokuhamba. Siyimizuzu nje engama-35 ukusuka eKristiansand Zoo, imizuzu engama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseKjevik, i-1km ukuya kwivenkile ekufutshane kunye nepatisserie, kunye neemitha ezingama-700 ukusuka kwisikhululo sebhasi esikufutshane ukuba awukuthandi ukuhamba okanye ukuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Nina Lunderød
Sihlala sikhona kwaye siyakuvuyela ukunceda ngeengcebiso okanye iingcebiso kwindawo yasekhaya kwaye sikubonise ukuba uyasifuna.